Polyester Felt, Polyester tsono Felt, Needlepunched Felt - Tiantai Yongzhu
Tiantai Yongzhu Filter Factory huru mugadziri rejira nonwoven mu China. takapiwa pakuramba kuti michero mubhizimisi iri gadzira, workshop, uye midziyo Kusuma advanced hwokugadzira uye sayenzi kubva kune dzimwe nyika.
boka redu ane simba gadzira simba uye isu kunyanya zvibereko mupise zvinhu, huruva kubviswa hombodo, tsono akanzwa, nonwoven Sefa jira uye mhepo-kutonhodza firita. zvigadzirwa edu aivigirwa kunyika dzinopfuura 40, kusanganisira Southeast Asia, Middle Asia, Europe, Australia uye America.
We kuramba kupedzera kutsvakurudza mishonga matsva, uye zvakagadzira dzakatevedzana zvigadzirwa, seinotevera:
1) High-tembiricha mupise zvinhu: Metamax tsono akanzwa, FMS tsono akanzwa, tsono Washington City Offices akanzwa, tsono PTFE firimu akanzwa, firimu mupise zvinhu, tsono P84 akanzwa, PPS tsono akanzwa, non-rakarukwa mupise zvinhu. Vari zvikuru kureva kushandisa mukuru-tembiricha guruva kubviswa pakati maindasitiri ose simbi uye tsvina, marara incineration, nemhute simba zera, kupisa-tichidzivisa zvinhu, bhitumini nokusagadzikana, marasha, simende, chemubhotoro, mafuta unopfuta bhaira, etc.
2) Liquid-mupise zvigadzirwa: rakarukwa Sefa-jira, monofilament Sefa-jira, tsono polypropylene akanzwa, kunzwisisa tsono akanzwa, iyo inoshandiswa mune tsvina kurasira michina yakadai pepuranga uye bhandi-mhando Sefa-wokudhinda.
Hativimbi Nesimba mupfumi redu, yepamusoro midziyo, yepamusoro zvinhu uye basa zvizere, Haotian akatotanga akawana zvose mumhuri uye dzomunyika vatengi 'chivimbo. Vavariro yedu: Taigarotaura akaisa mhando uye zvikwereti vari chikuru chinzvimbo.
3) mhepo-kutonhodza Sefa mesh.Widely kushandiswa munzvimbo sezvo filtration uye nekupatsanurwa indasitiri (zvinowanzoshandiswa zvokudya filtration uye maindasitiri Sefa), kuti maindasitiri epetroleum, makemikari, simbi, simende, kwezvakatipoteredza dedusting vanguwo. Filtration rate inogona kubva 27% kusvika 78%. Zvakadai sezvokudya indasitiri pakugaya mupise uye furawa azvikuya, azvikuya uye dzimwe tsanga azvikuya. Kufanana shuga kugadzira, upfu mukaka, soybean mukaka etc.
Polyester Anti-kunofambira mberi tsono akanzwa (sezvaiita ne ...